Ciidamo Mareykan oo xalay weerar ka fuliyay Gobolka Shabellaha hoose - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Ciidamo Mareykan oo xalay weerar ka fuliyay Gobolka Shabellaha hoose
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya Gobolka Shabellaha hoose ciidamo Mareykan ah ayaa xalay waxa ay weerar ka fuliyeen deegaanka Hanti wadaag oo dhaca duleedka Degmada Janaale ee Gobolka Shabellaha hoose.
Weerarkaan ayaa dhacay xalay saqdii dhexe, kadib markii Ciidan watay diyaarado dagaal ay halkaasi ku dageen, kadibna ay fuliyeen weerarka.
Deegaanka weerarka uu ka dhacay ayaa la sheegay inay ku sugnaayeen Saraakiil ka tirsan Ururka Al Shabaab, inkastoo aanan la ogeyn weerarka dadka lagu dilay, balse waxaa la sheegay rasaastii ay fureen ciidamada inay ku gubteen guryo dad rayid deganaayeen oo cooshado ka sameysnaa.
Warbaahinta Shabaab ayaa sheegtay Ciidamada Mareykanka ee weerarkaasi fuliyay inay guryo dad shacab ah ay gubeen, kadibna ay ku laabteen diyaaradihii markii hore ay ku yimaadeen ee weerarka ay ku fuliyeen.
Mareykanka oo sanadkaan kordhiyay bartilmaameedka uu u gaysto Al Shabaab, ayaanan wali ka hadlin hawlgalkii qorsheysnaa ee xalay laga fuliyay duleedka Degmada Janaale.
Deegaanka Hanti wadaag ayaa 12-KM u jira Degmada Janaale oo Shabaab ay gacanta ku hayaan, waxa uu weerarkaan qayb ka yahay weeraro kala duwan oo lagu beegsado deegaanada Shabaab ay gacanta ku hayaan ee Gobolada dalka Somaliya.